Kamakura, ဂျပန်ရှိ ဦး တည်ရာ ခရီးသွားသတင်း
Kamakura, ဂျပန်အတွက် ဦး တည်ရာ
Mariela Carril | | ဂျပန်, ကြည့်ဖို့ဘာလဲ
ကမာကူရာ ပုံမှန်တစ်ခုဖြစ်သည် တိုကျိုကနေလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ဂျပန်၏မြို့တော်။ အကယ်၍ ကမ္ဘာကြီးသည်ဤကပ်ရောဂါကိုမဖြတ်သန်းခဲ့ပါက ၂၀၂၀ သည်အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲများနှင့်အတူဂျပန်နိုင်ငံ၏အထွတ်အထိပ်ခရီးသွားနှစ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
တိုကျိုမှအလွယ်တကူလေ့လာရေးခရီးများစွာရှိပြီးမြို့၏တောင်ဘက်တစ်နာရီမတိုင်မီတွင်ဖြစ်သည်။ စူပါနီးကပ်ခြင်းနှင့်အလွန်အမင်းအကြံပြုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အပြင်၌, ကျော်ကြားသော ကမာကူရဗုဒ္ဓ ဓာတ်ပုံထဲမှာဘာတွေတွေ့ရသလဲ
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် ကမ်းရိုးတန်းမြို့ တိုကျိုမှတစ်နာရီတောင်ဘက်သို့ရောက်သော။ တစ်ချိန်ချိန်တွင် ၁၂ ရာစု၌နိုင်ငံ၏နိုင်ငံရေးအချက်အချာနေရာဖြစ်ခဲ့ပြီး Minamoto shogun နှင့် Hojo စစ်ဗိုလ်တို့၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရာစုနှစ်တစ်ခုလုံးတည်ရှိခဲ့သောအစိုးရဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်အာဏာကိုကျိုတိုမြို့သို့လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။
ဒီနေ့ဟာရိုးရှင်းပါတယ် များစွာသောဘုရားကျောင်းများ၊။ ၎င်းသည်ကမ်းရိုးတန်းတွင်ရှိပြီးနွေရာသီတွင်များသောအားဖြင့်များသောအားဖြင့်ကမ်းခြေများရှိသည်။ Kamakura ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ?
ရထားနဲ့ ရွေးချယ်စရာသုံးခုရှိပါတယ်။ သင်ယူနိုင်ပါတယ် Odakyu လိုင်း အသက်သာဆုံးနည်းလမ်းပါ သင် Enoshima Kamakura အခမဲ့ Pass ကိုသင်ဝယ်ယူပြီး၎င်းတွင်တိုကျိုရှိ Shinjuku နှင့် Kamakura အကြားရှိခရီးစဉ်လည်းပါဝင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းတွင် ၁၅၂၀ ယန်းသာလျှပ်စစ်ရထားဖြစ်သော Enoden ကိုအသုံးပြုထားသည်။ ဤသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းအားဖြင့်ရောက်ရှိရန်မိနစ် ၉၀ ခန့်ကြာသည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်အချိန်နည်းနည်းယူလိုလျှင် JR လိုင်းကိုအသုံးပြုရမည်။
JR မှာရှိတယ် Shonan Shinjuku လိုင်းShinjuku နှင့် Kamakura တို့ကိုတစ်နာရီကြာဆက်သွယ်နိုင်ပြီးယန်း ၉၄၀ ကုန်ကျသည်။ ရထားကို Zushi သို့သွားရန်စောင့်ဆိုင်းသင့်သည်။ ၎င်းသည် Kamakura ဘူတာ (တစ်နာရီ ၂ ကြိမ်ထွက်ခွာ) တွင်ရပ်နားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ မဟုတ်လျှင် Ofuna ဘူတာတွင်သင်ပြောင်းရမည်။ နောက်ထပ်လိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည် JR Yokosuka လိုင်း တိုကျိုဘူတာကို Kamakura နှင့်ဆက်သွယ်ပေးသည်။ ဒီခရီးကိုတစ်နာရီတောင်မကြာဘဲယန်း ၉၄၀ ကုန်ကျသည်
အဆိုပါဇုန်နှစ်ခု 'passes ရှိပါတယ် Enoshima Kamakura အခမဲ့ Passအဆိုပါ Enoden အသုံးပြုမှုနှင့်အတူ Shinjuku / Kamakura အပြန်အလှန်ပါဝငျသောယန်း 1520 မှာ; ပြီးနောက် Hakone Kamakura Pass(၇၀၀၀ ယန်း)၊ ၎င်းသည် Enoden နှင့် Odayu လိုင်းကိုသုံးခွင့်ပြုသည်။ ထို့အပြင်သုံးရက်ဆက်တိုက် Hakone တစ်ဝိုက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလည်းဖြစ်သည်။
ကမာကူရာကိုငါဘာသွားလည်တာလဲ Kamakura ရှိအဓိကခရီးသွား attractions ည့်ဆွဲဆောင်မှုကို Kita Kamakura ဘူတာ၊ Kamakura ဘူတာနှင့် Hase Station အနီးရှိareasရိယာသုံးခုတွင်ဖြန့်ဝေထားသည်။ ဘယ်လိုသေးငယ်တဲ့မြို့ကယ့်ကိုပါ မင်းခြေလျင်သွားနိုင်တယ် သို့မဟုတ်ပိုမိုပါ ၀ င်သည့်အရာတစ်ခုအတွက်၊ ဆိုင်ကယ်ငှားပါ။ သင်ပိုမိုဝေးလံသောဒေသများသို့ရောက်လိုလျှင်ဘတ်စ်ကားများနှင့်တက္ကစီများလည်းရှိသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးလည်ပတ်မှုဖြစ်ပါတယ် Kamakura မဟာဗုဒ္ဓ, Kamakura Daibutsu ။ ကိုတိုကုင်းဘုရားကျောင်းရင်ပြင်တွင်တည်ရှိသောအမိဒါဗုဒ္ဓ၏ကြေးဝါရုပ်တုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အရှည် ၁၁ မီတာခွဲခန့်ရှိပြီးနိုင်ငံအတွင်းဒုတိယအမြင့်ဆုံးကြေးဝါဗုဒ္ဓဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၁၂၅၂ မှစတင်ခဲ့ပြီးရှေးဟောင်းဗိမာန်တော်၏ကြီးမားသောခန်းမအတွင်း၌တည်ရှိခဲ့သော်လည်း ၁၄ ရာစုနှင့် ၁၅ ရာစုနှစ်များအတွင်းတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းများစွာခံစားခဲ့ရသဖြင့်နောက်ပိုင်းတွင်၎င်းကိုအိမ်ပြင်တွင်တိုက်ရိုက်ထားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ကမာကူရာ၏မဟာဗုဒ္ဓသည်ဆယ်မိနစ်သာလမ်းလျှောက်ရုံသာရှိသေးသည်၊ ကက်စကူရာမှအန်ဒодန်းလိုင်းပေါ်ရှိတတိယဘူတာမှဟာ့စ်ဘူတာမှ ၁၀ မိနစ်သာလမ်းလျှောက်နိုင်သည်။ Enoden Terminal Station သည် JR Kamakura ဘူတာနှင့်ကပ်လျက်တည်ရှိပြီးဤလျှပ်စစ်ရထားငယ်သည် Kamakura ကို Enoshima နှင့် Fujisawa တို့နှင့်ဆက်သွယ်ထားသည်။ Coronavirus ကြောင့်ဗုဒ္ဓကိုဇွန်လအထိပိတ်ထားခဲ့ပြီးယနေ့ဖွင့်သော်လည်းနာရီများကိုနံနက် ၈ နာရီမှညနေ ၅ နာရီအထိလျှော့ချသည်။ ဝင်ကြေးကယန်း ၃၀၀ ပဲရုံ $3အောက်မှာ။
El Hokokuji ဘုရားကျောင်း ၎င်းသည်သေးငယ်။ လှပပြီးအတန်ငယ်ဝေးလံသည်။ ၎င်းသည် Rinzai ဗုဒ္ဓဘာသာဇင်ဂိုဏ်းဝင်ဖြစ်ပြီး Ashikaga မျိုးနွယ်စုများ၏မိသားစုဝတ်ပြုရာအိမ်တော်ဖြစ်သည့် Muromachi အစောပိုင်းတွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၁၉၂၃ ခုနှစ် Great Kanto မြေငလျင်ပြီးနောက် ၂၀ ရာစုအစောပိုင်းတွင်ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့သောပင်မခန်းမသို့မရောက်မချင်းတောင်ပေါ်သို့တက်သွားသောဥယျာဉ်တစ်ခုနှင့်ဥယျာဉ်ငယ်တစ်ခုသို့ကျွန်ုပ်တို့ရောက်သွားသည်။
ဝတ်ပြုရာအိမ်တော်တွင်အဖိုးတန်ဆုံးရုပ်ထုမှာဗုဒ္ဓ၏ရုပ်ပွားတော်ဖြစ်သည်။ သို့သော်သေးငယ်သောရဲတိုက်သေးသေးလေးနှင့်အကြီးမြတ်ဆုံးရတနာတစ်ခုလည်းရှိသည်။ ဝါးဥယျာဉ် အရာအဓိကခန်းမနောက်ကွယ်မှဖြစ်ပါတယ်။ ၀ ါး ၂၀၀၀ နှင့်လမ်းလျှောက်ရန်ကျဉ်းမြောင်းသောလမ်းများရှိသည် လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ဒီအလှတရားကိုစဉ်းစားနေတဲ့ matcha လက်ဖက်ရည် (လက်ဖက်စိမ်း) ကိုဘယ်မှာသောက်ရမလဲ။ Ashikaga မျိုးနွယ်စုများ၏ပြာများကိုကိုင်ထားပုံရသောဂူများလည်းရှိသည်။
Hokokuji ဘုရားကျောင်းကိုဘယ်လိုသွားမလဲ? Jomyoji ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်မှလမ်းလျှောက်ခြင်း (၎င်းကို Kamakura ဘူတာတွင်ယူပြီး၊ ၁၀ မိနစ်လျှင်ယန်း ၂၀၀) ။ ၂၃၊ ၂၄၊ ၃၆ ကိုသင်ယူနိုင်သည်။ သင်လမ်းလျှောက်လိုပါကနာရီဝက်သို့မဟုတ်တစ်နာရီခန့်အကြာတွင်ပင်ရထားဘူတာတစ်ခုတည်းမှခြေလျင်သို့ရောက်လိမ့်မည်။ ဝါးဥယျာဉ်သည်နံနက် ၉ နာရီမှညနေ ၄ နာရီအထိစတင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက်မှဇန်နဝါရီ ၃ ရက်အထိပိတ်သည်။ ၎င်းသည် ၃၀၀ ကုန်ကျပြီးလက်ဖက်ရည်ဝန်ဆောင်မှုကိုလိုချင်လျှင်သင်သည်အပို ၆၀၀ ယန်းပေးဆောင်သည်။
နောက်ထပ်ဘုရားကျောင်းသည် Hase ဘုရားကျောင်းဂျိုဒိုဂိုဏ်းဝင်နှင့်၎င်း၏မြင့်မားသောကြောင့်ကျော်ကြားသည် Kannon ၏တဆယ် ဦး ခေါင်းနှစ်လုံးရုပ်ထု, သနားခြင်းကရုဏာ၏နတ်ဘုရားမ။ ခန်းမသည် ၁၀ မီတာအမြင့်ရှိပြီး၊ ရုပ်တုကိုဂျပန်နိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးသောတစ်ခုဖြစ်သည့်ရွှေဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ဒဏ္endာရီအရဒီသစ်သားသည် Nara ၏ Kannon ၏ရုပ်ထုကိုထွင်းရန်အသုံးပြုသည်နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ဗိမာန်တော်၌ပြတိုက်များပါ ၀ င်ပြီးအပိုဝင်ပေါက်ပိုများသည့်အတွက်ရုပ်ထုများ၊ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ ၁၀ ပေပေရှိသောရွှေရုပ်တုပါသော Amida-do ခန်းမဖြစ်သည်။
ဗိမာနျတျော, ကတောင်ကုန်း၏ဘေးထွက်တွင်တည်ရှိသောကြောင့်တစ် ဦး ရှိပါတယ် Kamakura မြို့၏ရှုခင်းများလှပသောနေရာမှလှပသောလှေကားထစ်များကိုတွေ့ရသည်။ ပိုပြီးအေးအေးဆေးဆေးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်စားသောက်နိုင်မယ့်စားသောက်ဆိုင်လည်းတစ်ခုရှိတယ်။ တောင်စောင်းကုန်းတက်တွေတက်လာတဲ့လှေကားထစ်တွေမှာရှိတဲ့ Jizo Bodhisattva ရုပ်ထုငယ်ရာပေါင်းများစွာဟာကလေးငယ်တွေရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုပရဒိသုရောက်အောင်ကူညီပေးတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။
တောင်စောင်း၏အောက်ခြေတွင်ဥယျာဉ်များနှင့်ကန်များရှိသည့်ဗိမာန်တော်ဝင်ပေါက်ဖြစ်သည်။ Hasedera Hase ဘူတာမှငါးမိနစ်သာ ဒါဟာ 8 a.m. ကနေ 5:30 p.m. မှအောက်တိုဘာလနှင့်ဖေဖော်ဝါရီလအကြား5a.m. သည်အထိဖွင့်လှစ်။ ဘယ်နေ့မဆိုပိတ်လို့မရဘူး။ ဝင်ပေါက်က ၄၀၀ ကုန်ကျတယ်။
Kamakura ရှိအရေးအကြီးဆုံးဘုရားကျောင်းသည် Tsurugaoka Hachimangu ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ၁၆၀၃ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Minamoto မိသားစုနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ဆာမူရိုင်းများ၏နာယကဖြစ်သော Hachiman ထံအပ်နှံသည်။ ဒီဘုရားကျောင်းကို Kamakura boardwalk ကနေစီးဆင်းသွားပြီးတစ်မြို့လုံးကိုဖြတ်ကျော်ပြီး toris တော်တော်များများကိုဖြတ်ကျော်စီးဆင်းနေတဲ့လမ်းကြောင်းရှည်တစ်ခုဆီကို ၀ င်ရောက်လာတယ်။ အဓိကအခန်းသည်လှေကားထိပ်၏လှေကားထစ်များပေါ်တွင်တည်ရှိသည်။ အတွင်း၌ဓားများ၊ စာရွက်စာတမ်းများ၊ မျက်နှာဖုံးများပါသည့်ပြတိုက်တစ်ခုရှိသည်။
လှေကား၏ညာဘက်ခြမ်းတွင် ၂၀၁၀ ခုနှစ်အထိ shogun ကိုတိုက်ခိုက်ရန်ပုန်းခိုရာနေရာတစ်ခုဖြစ်သည့် ginko သစ်ပင်တစ်ပင်ရှိသည်။ ရှေးဟောင်းလှလှပပရွှေရောင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်မတ်လတွင်လေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်။ မသေဘဲသေဆုံးခဲ့သည်။
လှေကားထစ်များ၏အောက်ခြေတွင်များသောအားဖြင့်တေးဂီတနှင့်ကပြပွဲများရှိသည်။ နောက်တစ်နေရာတွင်အခြားသန့်ရှင်းရာဌာနနှင့်အထောက်အကူပြုအဆောက်အ ဦး များကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ သင်တို့သည်လည်းဤဘုရားကျောင်းကို Kamakura ဘူတာမှဘတ်စကားဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ခြေလျင်ဖြင့်သော်လည်းကောင်းသွားနိုင်သည်။ ဝင်ကြေးအခမဲ့.
Kamakura ရှိသည့်ဘုရားကျောင်းအရေအတွက်ကိုကျွန်ုပ်တို့မဖော်ပြနိုင်သော်လည်း၎င်းတို့ကို Kenchoji, Zeniarai, Engakuji, Meigetsuin, Ankokuronji, Jomyoji, Zuisenji, Myohonji, Jochiji, Tokeiji and Jufukuji သူတို့အားလုံးသည်လှပသည်၊ သို့သော်၎င်းကိုဘုရားကျောင်းများသို့မကြည့်နိုင်ပါ။ တတိယအကြိမ်အတူတူဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့အကြံပြုတာကတော့ Enoshima နှင့်၎င်း၏ကမ်းခြေများသို့လည်ပတ်ပါ နှင့်အချို့သောတောင်တက်လုပ်ပါ။
Enoshima သည်တိုကျိုအနီးရှိကျွန်းငယ်တစ်ကျွန်းဖြစ်သည် သငျသညျခြေလျင်ဖြတ်ကူးသောတံတားအားဖြင့်ကမ်းခြေနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ကျွန်းတွင်သန့်ရှင်းရာဌာန၊ လေ့လာရေးမျှော်စင်၊ ဂူများနှင့်ဥယျာဉ်များရှိသည်။ တောအုပ်တောင်ကုန်းကိုခြေလျင်ဖြင့်စူးစမ်းလေ့လာနိုင်ပြီး၊ ကံဇာတာ၊ ကျန်းမာရေးနှင့်ဂီတ၏နတ်ဘုရားမ Benten ထံအပ်နှံထားသောနတ်ကွန်းများစွာကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
အဲဒီမှာငါးပြတိုက်လည်းရှိပြီးကမ်းခြေနွေးအေးဆေးရေနှင့် crabbing နှင့်အတူအလွန်ကြီးစွာသော! Kamakura မှ Enoden သည် ၂၅ မိနစ်ခန့်ကြာသည်။ Shinjuku မှသင်တို့တိုကျိုဘူတာသို့လည်းသွားနိုင်သည်။
နောက်ဆုံးတော့ သငျသညျ Kamakura အတွက်တောင်တက်လိုလျှင် XNUMX လမ်းကြောင်းရှိပါတယ်: Daibutsu Tour၊ Tenen Tour နှင့် Gionyama Tour တို့သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်မုန်တိုင်းကြောင့်ယနေ့ပိတ်ထားရသည်။ လာမည့်နှစ်တွင်သင်သွားပါကမည်သူများဖွင့်ထားသည်ကိုစစ်ဆေးပါ။ ၎င်းတို့သည်ဘုရားကျောင်းနှင့်နတ်ကွန်းများကိုဆက်သွယ်ပေးသောတောင်ကုန်းများကိုဖြတ်သန်းသွားသောအလွန့်အလွန်ကောင်းသောအစိမ်းရောင်လမ်းကြောင်းများဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်သူတို့သည်နာရီဝက်ကျော်မှမိနစ် ၉၀ အထိမကြာသော်လည်းသူတို့သည်ခင်းထားခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖိနပ်များနှင့်မိုးရွာခြင်းကိုသတိပြုပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ခရီးသွား » ကြည့်ဖို့ဘာလဲ » Kamakura, ဂျပန်အတွက် ဦး တည်ရာ
အဘယ်အရာကို Ourense တွင်ကြည့်ပါ